Ciidamada Shisheeye Oo Isaga Cararay Deegaan Istiraatiiji Ah. – Bogga Calamada.com
Ciidamada Shisheeye Oo Isaga Cararay Deegaan Istiraatiiji Ah.
October 30, 2017 9:04 am Views: 504
Wararka ka imaanaya gobalka Shabeelada hoose ayaa xaqiijinaya in ciidamada Shisheeyaha isaga guureen deegaan muhiim ah oo dhaca duleedka magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha hoose.
Ciidamada Shisheeye ee Yugaandha ayaa ka guuray deegaanka Rasadaay oo u dhow magaalada Baraawe, waxayna afka saareen deegaanka Marin Gubaay oo xiga dhanka deegaanka Buula-Mareer ee gobolka Shabeellaha hoose.
Dadka Deegaanka Rasadaay ayaa farxad ballaaran ka muujiyay guuritaanka Ciidamada Shisheeyaha ay ka guureen deegaankooda, waxaana ay sheegeen in dhibaatooyin badan ay ku qabeen oo ay kamid tahay iyagoo xoolaha ka hortaagnaa iney daaqaan howdka deegaanka.
Ka bixitaanka Ciidamada Shisheeyaha ee deegaankan wuxuu imaanayaa iyadoo dhowr jeer ay la kulmeen weeraro cagta lagu mariyay difaacyo ay lahaayeen, waxaana macquul ah in ka bixitaankooda uu salka ku hayo cabsi ay ka qabaan iney la kulmaan weeraro culus.